Doanld Trump oo ku guuleystay madaxweynaha Maraykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDoanld Trump oo ku guuleystay madaxweynaha Maraykanka
Doanld Trump oo ku guuleystay madaxweynaha Maraykanka
November 9, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka Donald Trump. [Sawirka: ABC News]
Washington-(Puntland Mirror) Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka.
Ganacsadaha siyaasadda ku biiray ayaa noqonaya madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka.
Si musharaxa uu u guuleysto waxaa laga raby 270, taasoo uu kor u dhaafay Trump sida ka muuqata sawirka kore.
Tirada codadka ayaa muujinaya in Trump uu ku guuleystay goboladii lagu hardamayay ee Ohio, Florida, North Carolina iyo Pennsylvania, kuwaasoo muhiim u ah tartanka Aqalka Cad.
Sida dhaqanka ah musharaxa ku guuleysta Ohio ayaa ku guuleysta doorashada, iyadoo Maraykanka ay dhahaan: “Haddii aad ku guuleysatid Ohio waxaad ku guuleysatay madaxtinimada.”
Haweenyda 70-jirka ah Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga oo ahaan jirtay marwadii kowaad ee Maraykanka sidoo kalena soo noqotay xoghayaha arrimaha dibada Maraykanka ayaa loo saadaalinayay in ay ku guuleysato doorashada.
November 7, 2016 Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump oo weeraray Soomaalida joogta Maraykanka
November 9, 2016 Donald Trump wins US presidency
Ciidamada badda Midowga Yurub oo cadeeyay in weerarkii ugu horeeyay muddo labo sano iyo bar gudahood ah ay burcad-badeeda Soomaalida qaadeen
Hordhac: Waayo badan waxaynu usoo joognay ama laynoo ka sheekeeyeey, abaaro galaaftay nafaha dad iyo iyo duunyo badan oo geyigeena ka dhacay. Waxa ay abaarahu dhacaan marka baadka iyo biyuhu yaraadaan ama la waayo. 3 [...]
Madaxweyne Erdogan oo u safray Ruushka si uu u soo cesho xiriirkii labada dal
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u duulay dalka Ruushka maanta oo Talaado ah isagoo kulankiisii kowaad la yeelan doona dhiggiisa Vladimir Putin tan iyo markii labada dal ay bilaabeen in ay [...]